Myanmar Car Myanmar Car
the best automobile (car bus truck, etc) information website in myanmar
About Myanmar Car
Myanmar Car is an automobile (car bus truck, etc) information website in myanmar. You can get many information about car bus truck, etc. >>For detail information
မြန်မာ့ကားဆိုသည်မှာ ရွေ့လျားယာဉ် (ကား၊ ဘပ်စ်၊ ကုန်တင်ကား စသည်) တို့နှင့် ပတ်သတ်သော သတင်းအချက်အလက်များ ဝဘ်ဆိုက်(website) ဖြစ်သည်။ ကား၊ ဘပ်စ်ကား၊ ကုန်တင်ကား စသည်တို့နှင့်ပတ်သတ်သော သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိနိုင်ပါသည်။ >>အသေးစိတ်ဖတ်ရှုရန် ...
In myanmar, the automobile (car bus truck, etc) market is becoming more and more active. Generally speaking, the price of automobile (car bus truck, etc) in Myanmar is much higher than in other countries.
For example, the price fora20-year old Toyota Corolla is more than 100,000,000Ks, 10-year old Mitsubishi Pajero is more than 1,000,000,000Ks.
You can find many automobile products from high-end to low-end in our website. >> For detail information
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရွေ့လျားယာဉ် (ကား၊ ဘပ်စ်ကား၊ ကုန်တင်ကား စသည်) တို့၏ဈေးကွက်မှာ တစ်စတစ်စ သက်ဝင်လှုပ်ရှားလို့ လာပါပြီ။ ယေဘုယျအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ကားဈေးနှုန်းမှာ အခြားသောနိုင်ငံများထက် အလွန်မြင့်မားပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် လွန်ခဲ့သောအနှစ်နှစ်ဆယ်က ထုတ်လုပ်ခဲ့သော Toyota Corolla အမျိုးအစား ကားသစ်တစ်စီး၏ ဈေးနှုန်းမှာ ၁၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ကျပ် (ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်) ထက်ပိုပြီး၊ လွန်ခဲ့သော ဆယ်နှစ်၏ မော်ဒယ်လ် Mitsubishi Pajero အမျိုးအစားမှာ ၁ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ကျပ် (ကျပ်သိန်းတစ်သောင်း) ထက်ပိုမိုပါသည်။ >> အသေးစိတ်ဖတ်ရှုရန် ...
Buy car in Myanmar
If you want to buyacar in myanmar, you can find many information from our website. The price range is from 50,000,000Ks to more than 2,000,000,000Ks.
We can suggest the best car and also help you to do all the paper procedures. >> For detail information
ကားဝယ်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ဝဘ်ဆိုက်မှာ ကားနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ အချက်အလက် မြောက်များစွာ ရှိပါတယ်။ ကားဈေးနှုန်းများကတော့ ၅၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ကျပ် (ကျပ်သိန်းငါးရာ) မှ ၂ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ကျပ် (ကျပ်သိန်းနှစ်သောင်း) ကျော်အထိ ရှိကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သည် အကောင်းဆုံးကားရရှိစေရန် အကောင်းဆုံး အကြံပေးနိုင်ပြီး၊ စာရွက်စာတမ်းကိစ္စများကိုလည်း ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ >> အသေးစိတ်ဖတ်ရှုရန် ...
Sell car in Myanmar
If you want to sell your car, truck, bus , we also can find buyer, negotiate with buyer for you to help you sell your car withagood price. >> For detail information
အကယ်၍ လူကြီးမှ လူကြီးမင်း၏ကားကို ရောင်ချင်သည်ဆိုပါကလည်း ကျွန်တော်တို့မှ ဝယ်လက် ရှာပေးပါမည်။ ကားဝယ်သူနှင့် ညှိုနှိုင်းပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ပြေလည်စွာဖြင့် ဈေးကောင်းရရန် ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။ >> အသေးစိတ်ဖတ်ရှုရန် ...
Rent car in Myanmar
If you do not want to buy, but want to rentacar, we can also help you. We can suggest the best car and also help you to do all the paper procedures.>> For detail information
အကယ်၍ လူကြီးမင်းသည် ကားဝယ်လိုခြင်းမဟုတ်ပဲ ကားငှားယူလိုပါက ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီမှ ကူညီပါရစေ။ ကျွန်ုပ်တို့မှ အကောင်းဆုံးကားကို ရှာဖွေပေးနိုင်ပြီး စာရွက်စာတမ်းကိစ္စများကိုလည်း ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ >> အသေးစိတ်ဖတ်ရှုရန် ...
lend your car in Myanmar
If you haveacar, but do not use it every day, maybe you can lend it to other people and get some benefits. We can also help you to find the customer who want to rent. >> For detail information
အကယ်၍ လူကြီးမင်းတွင် ကားရှိပြီး နေ့စဉ်မသုံးဖြစ်ဘူးဆိုပါက ထိုကားကို တစ်ခြားသူအားငှားပြီး အကျိုးအမြတ် တစ်စုံတစ်ရာ ရနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှ ငှားယူလိုသော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ရှာဖွေပေးပါမည်။ >> အသေးစိတ်ဖတ်ရှုရန် ...
myanmar web design　myanmar real estate　ミャンマー不動産投資　ミャンマー進出支援